ए राजेन्द्र, ओलीलाई अझै प्रधानमन्त्री बनाइराख्ने?
ए राजेन्द्र, ओलीलाई अझै प्रधानमन्त्री बनाइराख्ने? - Nepal Talk
यतिखेर काँग्रेसको एउटा अम्ब्रेलाभित्र दूइवटा खेमा छ । नेपाली काग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले राजेन्द्र महत्तोसंग अनौपचारिक संवाद गरेका थिए । शितलनिवासमा राष्ट्रपतीले बोलाएको सर्बदलिय बैठकमा काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले राजेन्द्र महत्तोको पाखुरामै समातेर भने, ए राजेन्द्र, ओलीलाई अझै प्रधानमन्त्री बनाइराख्ने? भन्ने प्रश्न गरे । सोहि प्रश्नको जवाफमा महत्तोले हामीले बनाएको हो? ‘तँपाइकै सभापतीले जोगाएको त हो नी’ भन्ने जवाफ फर्काएका थिए ।
‘ओली अहिले पनि जनादेश भन्छन् बा, अहिले पनि संसद विघटन गर्ने भन्छन् । यस्तो कहाँ पाइन्छ? ,’ पौडेलले राजेन्द्र महत्तोसंग प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
हुनत राजनितीको जोडघटाउमा को माइनस अथवा को प्लस हुन्छ पत्तै हुन्न देखिएका सबै सत्य हुदैनन् । यो संवादको आशयले काँग्रेसभित्र पनि सभापती देउवासंग रामचन्द्र पौडेलहरुको बिचमा गहिरो फाटो देखाएको छ । त्यसो त ‘तँपाइकै सभापतीले ओलीलाई जोगाएको त होनी’ भन्न सक्ने राजेन्द्र महत्तोलाई पौडेलले किन केहि जवाफ फर्काउन सकेनन् त? नेपाली काँग्रेसका नेताहरु गगन थापा र पौडेलहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बिघटन गरेकै दिनदेखि ओलीको राजनितिक चरित्रमाथी प्रश्न गर्दै आएका छन् तर देउवा भने चुनावमा जान परे जाउँला नि त जस्ता ललिते भाषा बोल्दै आएका छन् । यहि बाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि ओलीले देउवाको बुइ चढेका छन् कि छैनन् भनेर । २०७५ जेठमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबिच एकता भयो । यो पार्टिको एकता थियो । ओलीले एकता भत्काएर व्यक्तिवादि बनाइदिए भन्ने आरोपको कुनै खण्डन नै गर्न सकेनन् । व्यक्ति जेसुकै होस जुनसुकै पार्टिमा पनि सिदान्त निती र नियम प्रधान हुनुपर्छ । उनले नेकपालाई आफनो प्राइभेट लिमीटेड जस्तै बनाएर हिडें । उनै ओलीको एकता र सहकार्य तिन बर्ष पनि टिक्न सकेन् । सहमती सम्झौता विपरित एकल निर्णयमा संसद बिघटन गरिदिए । उक्त कामको सर्बोच्च अदालतले बदर गरिदयो । उनी कती पनि डगमगाएनन् । राजनितिक चरित्र नभएको प्रधानमन्त्री भनेर कतिपय राजनितिक विज्ञहरुले भनिसकेका छन् र पनि अँह कतै गल्ती महशुश हुने खालका कुरै गरेनन् । सर्बाेच्चले नेकपा बदर गर्दा दिपावली मनाए । यसको अर्थ यस अघि नेकपाले उनलाई फ्िलफाप गराएनछ, तर अहिले अदालतले नेकपा एमाले बनाइसक्दा पनि ओलीसंग पार्टिभित्रको बहुमत पक्ष अझै पनि असन्तुष्ट छ । यदि ओली सच्चा हुन्थे भने नेकपा एमालेभित्र किन सबैलाई समेटन सक्दैनन् ? अहिले नेकपा संग सिंगौरि खेलेर नथाकेका ओलीले आफना समकक्षीहरुलाई कार्वाहिको हौवा फौलाएर तर्साइदिएका छन् । अझै पनि संसद बिघटन गरेर सत्ताको आयु लम्ब्याउने होडबाजीमा लागिपरेका छन् । यतिखेर ओली पार्टिको निती नियम विपरित हिडेंको आरोपलाई आत्मसमिक्षा गर्नू त कँहा हो कँहा उल्टै बालुवाटारको रमाइलोमा व्यस्त छन् । यदि ओलीसंग देउवाको उधारो सहमती र सहकार्य थिएन भने देउवा किन ओलीको बदमासी एजेण्डामा सहि लगाउदै हिडेका छन् त? देउवालाई साच्चै देशको माँया लागेको थियो भने किन चुनाबमा जान्छु भन्दै हिडिरहेका छन् ? यसको पछाडिको रहस्यमा देउवालाई ओलीले पक्कै पनि केहि आश देखाएको हुनुपर्छ । नत्र गगन थापा र रामचन्द्रहरुको एकै श्वरमा किन देउवाको बोली बाझिएको छ ? नतिजा पर्ख र हेर मात्र भन्न सकिन्छ । राजनितीक शाश्त्रका विज्ञ एम्मा गोल्डम्यानले भनेका छन कि ‘यदि मतदानले केहि परिवर्तन गरेको छ भने, तिनीहरूले यसलाई अवैध बनाउँदछन् ।’ त्यस्तै मिकी कौस नामक दार्शनिकले भनेका छन कि एक चोरको साथमा लागेपछि एक विद्वान व्यक्ति पनि डकैत ठहर हुन्छ ।’ – दलाई लामाले भनेका छन
‘एक विद्वान व्यक्ति मात्र नोबल हुन्छ जब उसले वा उसले वास्तविक अभ्यासमा राख्छ जुन केवल शब्दहरूको सट्टामा सिकेका छ ।’ त्यसैले ओलीको धमिलीएको राजनितीक चरित्रभित्र पसेर नेपाली काग्रेसले बिपीको समाजवादमा औला उठाउने वातावरण नबनाएकै जाती हुन्छ कि ?